L3 Gbanye Manufacturers & Suppliers - China L3 Gbanye Factory
WL8200-I1 802.11ac Ime ụlọ D ...
S5750E-26X-SI L2 Dual Stack 40G Intelligent Fiber Gbanye
S5750E-26X-SI mgba ọkụ bụ ọgbọ ọhụrụ nke ngụkọta ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi na ngbanwe ohere nke DCN mere maka ndị na-ebu ya na netwọk MAN. S5750E-26X-SI na-enye ọdụ ụgbọ mmiri 24 10GbE (SFP +) na 2 40GbE (QSFP) na ike na-enweghị isi, ezubere maka ọnọdụ nnweta 10G na ntanetị 10G ngbanwe izugbe na ụdị ọkwa teknụzụ nke ntụkwasị obi dị elu, na nnweta. Akụkụ dị mkpa na arụmọrụ arụmọrụ na Scalability 10 Gigabit Ethernet Njikọ nke S5750E-26X-SI ...
S5750E (R2) Dual Stack 10G Ethernet Routing Fiber Gbanye
DCN S5750E usoro mgba ọkụ zuru eriri stackable ịgbagharị switches na ofu, wuru na-10GbE uplink ọdụ ụgbọ mmiri. Ndị switches ndị a jisiri ike na-enye nnweta dị elu, scalability, nchekwa, arụmọrụ ike, yana ọrụ dị mfe yana atụmatụ L3 bara ụba. Ọ dị mma maka nchịkọta ma ọ bụ oyi akwa maka ogige, ụlọ ọrụ, gọọmentị na netwọkụ na-eweta ọrụ. Akụkụ dị mkpa na arụmọrụ na arụmọrụ na ikike na ikike ịgbanwere elu, usoro S5750E (R2) na-akwado ọsọ ọsọ ọsọ L2 / L3 ...
DCN S5750E usoro switches bụ ụlọ ọrụ na klas nwere ike ịgbanwerị ihe ntụgharị na ọdụ ụgbọ mmiri 10GbE gbagọrọ agbagọ. Ndị switches ndị a jisiri ike na-enye nnweta dị elu, scalability, nchekwa, arụmọrụ ike, yana ọrụ dị mfe yana atụmatụ L3 bara ụba. Ọ dị mma maka nchịkọta ma ọ bụ oyi akwa maka ogige, ụlọ ọrụ, gọọmentị na netwọkụ na-eweta ọrụ. Key Akụkụ na Highlights Performance na Scalability Na elu ịmafe ikike, S5750E (R2) usoro support waya-ọsọ L2 / L3 ...